Onlineလိုငျးပျေါက ဆရာမ – My Blog
ကနြျောလဲ ရနျကုနျရောကျတာ ကွာလာတော့ ပငျြးလာတယျ အပေါငျးအသငျးမိတျဆှလေဲမရှိဘူး၊ အဲတော့ ဖုနျးထဲမှာ ဝီခကျြ အပေီပီ ကို ဒေါငျလုပျဆှဲပီး အကောငျ့ဖှငျ့လိုကျတယျ၊ အဲဒီမှာ ရှာလိုကျတော့ အမြားကွီးတှတေ့ယျ၊ အဲဒီအထဲကမှ အသကျကွီးကွီးနဲ့ အနျတီမမတယောကျနဲ့ လိုးဖူးတာ၊ သူက ကြောငျးဆရာမ အသကျကတော့ ၅၀ လောကျရှပီ၊ သူ့ကို ဟိုငျးလိုကျတော့ ပွနျဟိုငျးတယျ၊ ‘နကေောငျးလား’ ‘ကောငျးတယျ’ ‘အသကျဘယျလောကျလဲ’ ‘ဒို့က မငျးထကျအသကျအမြားကွီးကွီးတယျ’ ‘ဒါဆို မမလို့ချေါမယျ’ ‘မမ မဟုတျဖူး အနျတီအရှယျပါ’ ‘ဟုတျရပါတယျ အနျတီ ‘ လိုပွောရငျး သူကမေးတယျ။ ‘ကြောငျးသားလား’ ကနြျောက ‘မဟုတျပါဘူး ကြောငျးက ဒုတိယနှဈနဲ့ ထှကျထားတာ’ ‘ရုပျကတော့ တျောတျောပှေးမယျ့ ရုပျပဲ’ ကနြျောကလဲ ‘နဲနဲပါးပါးပါ’ လို့ ဖွလေိုကျတယျ၊
ခဏကွာတော့ သူ့ပုံတောငျးကွညျ့လိုကျတော့ လုံးဝကို ထငျမှတျမထားတဲ့ပုံမြိုးဗြာ၊ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးတောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ကွီး၊ ‘အနျတီက လှလိုကျတာ’ ‘ဒို့က အိုနပေါပီ မငျးပှေးခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးတှလေောကျတော့ မလှပါဘူး’ ‘အာ မဟုတျတာ ကနြျော တှဖေူ့းတဲ့ မိနိးမတှထေဲမှာ အနျတီက အလှဆုံးပဲ၊ ပီးတော့ အနျတီဘျောဒီက တောငျ့တယျ၊ ရှယျပဲ’ ‘ကောငျလေးနျော ဟုတျလဲ မဟုတျပဲနဲ့’ ‘အဲဒါနဲ့ ထပျပွပါအုံး ကွညျ့လို့မဝလို့’ ‘မငျးလဲ ပွလေ’ ‘ကနြျောပွရငျ တကယျကွညျ့မှာလား’ ‘အငျးကွညျ့မယျ’ ကြ နျောလဲ အရဲစှနျ့ပီး ကနြေျာ့ လီးကို ဓါတျပုံရိုကျပီးပို့လိုကျတယျ၊ ‘ဟယျအကွီးကွီးပဲ’ ‘ကွိုကျလား’ ‘ဘာတှလောမေးနတောလဲ’ ‘ကနြေျာ့ကို စိတျဆိုးသှားလား’ ‘မဆိုးပါဘူး ၊ နားလညျပါတယျ’ ‘အဲဒါဆိုရငျ အနျတီပုံလဲပွ’ ‘မပွဘူး.. ကွညျ့ခငျြရငျ လာကွညျ့’ ‘အိုကေ ဘယျလာရမလဲ’ ဆိုတော့ သူလိပျစာပေးတယျ၊ အဲ့ညကတော့ ဖုနျးထဲမှာ တခြီလောကျပီးအောငျ လိုးလိုကျသေးတယျ၊ နောကျရကျ သူပေးတဲ့ လိပျစာသှားတော့ တံခါးဖှငျ့ပေးတယျ၊
“”တယောကျထဲနတောလား”” “”မဟုတျဘူး သူ့အခနျးဖျောက နယျပွနျသှားလို့”” ””အဲ ဒါနဲ ဘာသောကျမလဲ””” ကနြျောလညျး ””နို့သောကျမယျ””’ လို့ ပွောလိုကျတယျ၊ “”လူဆိုးလေး…အဲဒါဆိုလာလိုကျခဲ့”” အခနျးထဲရောကျတော့ ကွမျးပွငျမှာခငျးထားတဲ့ မှယေ့ာထူထူကွီးပေါ ထိုငျခလြိုကျပီး အနျတီကို ဖတျထားလိုကျတယျ၊ သူက “”ကဲပွောစမျးပါအုံး လိုငျပျေါကနေ ဘယျနှဈယောကျ တောငျ စားပီးပီလဲ”” “”မစားဖူးသေးပါဘူး အနျတီရယျ ခုမှစားမှာပါ””ဆိုပီး သူ့ဖကျလှညျ့ကာ ကဈစငျဆှဲလိုကျတယျ၊ ပီးတော့ သူ့ ပါးစပျထဲကို လြှာထဲ့ မှပေေးလိုကျတဲ့ သူလဲ အဲလိုပွနျလုပျပေးတယျ၊ ကဈစငျရိုကျနရေငျ သူ့အကြီကိုခြှတျပီး နို့တှကေို နယျ၊ ပီးတော့ နို့တှကျေု စို့ရငျးနဲ့ လုံခညျြကို ခြှတျပဈလိုကျတယျ၊
ကိုယျလုံးတီးဖွဈသှားမှ အားပါးပါး နို့ကွီးတှအေယျ ဗိုကျကခပျြ၊ ဖငျကွီးကကားပီး စောကျဖုတျကွီးကလဲ ဖောငျးနတောပဲ ၊စောကျမှေးတှလေဲ ရိတျထားတော့ ကနျြောလဲ မနနေိုငျတာနဲ့ ကုနျးယကျကဈလိုကျ တယျ၊ ဆရာမဆိုရငျ ကောငျးလှနျးလို့ ထှနျ့ထှနျ့ကို လူးနတောပဲ၊ နောကျတော့ စောကျဖုတျထဲကို လကျခလယျထဲ့ပီး ဂြီစပေါ့ နရော ကို မှေ စောကျစိကို စုပျပေးလိုကျတော့ အမလေးတပီး သေးတှပေါ ပနျးထှကျလာတယျ၊ သူပီးသှားအောငျ စုပျပေးပွီး ခဏနားလိုကျ တယျ ၊ အဲဒီတော့မှ သူက မေားပနျးတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ ကနြေျာ့ ရငျဘကျပျေါ လာအိပျပီး “”တယောကျမှ မစားဖူးသေးလို့သာပေါ့ စားမြား စားဖူးရငျ သူသသှေားလောကျတယျ”” အဲဒီတော့မှ ကနြျောလညျးဘောငျးဘီ ကို ခြှတျပီး လီးကိုသူ့လကျထဲ ထညျ့ပေးထား တယျ ၊ သူလဲ လီးကိုရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျနရေငျကနေ အောကျလြှောသှားပီး ကုနျးစုပျတော့တာပဲ၊ အဲဒါတှကွေောငျ့ အနျတီမမ တှကေိုကွိုကျတာ သိပျပွောစရာမလိုဘူး၊
သူလဲလီးထိပျကို လြှာလေးနဲ့ ထိုးလိုကျ လီးတခြောငျးလုံးကို လြှာနဲ့ယကျလိုကျ၊ လီးတခြောငျးလုံး ငုံစုပျလိုကျနဲ့ တျောတျောလေး ကွာသှားတယျ၊ ကနြျောလဲ လိုးခငျြလာတာနဲ့ “”အနျတီလိုးကွရအောငျ”” “”အငျး”” သူ့ကိုပျေါကိုတကျပီး လီးကို မထညျ့သေးပဲ စောကျဖုတျဝမှ လှညျ့မှပေ့ေးနျေ ကွာလာတော့ သူ့အလိုးခံခငျြပီတဲ့ အဲဒါနဲ့ လီးကိုစောကျဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ခလြိုကျတယျ၊ “”အား…. နာလိုကျတာ”” “”ခလေးပါအနျတီရယျ နောကျကရြငျ ကောငျးသှားမှာပါ”” ဆိုပီး ကနြျောလဲ သူ့စောကျဖုတျကွီးကို စောငျ့လိုးနပေိတယျ၊ နဲနဲကွာလာတောငျ့ စောငျ့ရတာညောငျးလာတာနဲ့ သူ့ကိုမွငျးစီးခိုငျးပီး အောကျကနေ နို့ကိုခပြေေးနတေယျ၊
သူ လဲ မောလာတော့မှ… “”အနျတီပုံစံပွောငျးရအောငျ”” ဆိုပီး လေးဘကျကုနျးခိုငျးလိုကျတယျ ဖငျဲကီးပွီး ဝိုငျးနတေော့ ကိုငျစောငျ့ရ တာ အားရတယျ၊ ကနြျောအကွိုကျဆုံးပိုဆကျရှငျဆိုတော့ အားသကုနျလလိုးတော့တာကဲ သူလဲ ကောငျးလှနျးလို့ တအားအားနဲ့ အျောနတော၊ နာရီဝကျလောကျကွာတော့မှ သူလဲပီးခငျြလာပွီး “”လုပျပါ မောငျရယျ အရမျးကောငျးနပေီ”” ကနြျောလဲ အရှိနျမွငျ့ စောငျ့ရငျး သူ့စောကျဖုတျထဲကို လီးတဆုံး ထညျ့ကာ သုတျရတှေကေို ပနျးထဲလိုကျတယျ၊ ပီးတော့မှ “”အရမျးခဈြတာပဲ မောငျ ရယျ”” ဆိုပီး ပါးလေးကိုလာနမျးတယျ၊ အဲ့နကေ သူ့သူယျခငျြးနယျပွနျသှားတာ ၂ညအိပျ ကွာမယျဆိုတော့ ကနြျောလဲ သူ့အခနျးမှာ ပဲအိပျပွီး အဲညက ၆ခြီလောကျလိုးပွဈလိုကျတယျ၊ နောကျဆုံးအခြီမှာတော့ ပါးစပျထဲကို လီးရတှေေ ပနျးထဲ့ပီး သောကျခိုငျလိုကျ တယျ၊ အဲဒီကနောကျ သူ့သူငယျခငျြး နယျပွနျသှားတဲ့အခြိနျတိုငျး လိုးဖွဈကွတယျ၊
နောကျတော့ သူ့သူငယျခငျြးက ရိပျမိသှားပီး သူ့သူငယျခငျြးကိုပါလိုးပေးလိုကျရတယျ၊ ကနြျောနဲ့ ဆရာမအဆငျပွသှောတာ သူ့ သူငယျခငျြးကွောငျ့ ဆိုတာ နောကျမှ သိရတယျ၊ သူ့သူငယျခငျြးကပဲ ကနြေျာ့ အကောငျ့ကို အပျပီး သူနဲ့ စကားပွောခိုငျးခဲ့တာ တဲ့၊ နောကျပိုငျးတော့ သူ့နဲ့မိတျဆငျပေးတယျ၊ သူနာမညျက ဒျေါယမငျး အသကျကတော့ ၄၅ လောကျရှိပီ၊ သူကတော့ ပှဲစားပေါ့၊ သူ့မှာ က ယောကြားရှိတယျ သူ့ယောကြားက အစိုးရဝနျထမျး၊ နယျမှာတာဝနျကနြတော၊ ဒါပမေယျ့ ဒျေါယမငျးက သူ့ယောကြားတပညျ့ လေးနဲ့ဖွဈနတော၊ ဒါကိုလဲ ဆရာမပွောပွလို့သိရတာ၊ တကယျအပွငျမှာ တှလေို့ကျမှ ဒျေါယမငျးက ကနြေျာ့ ဆရာမထကျ ရုပျပို ခြောနတေယျ၊ အသားဖွူတယျ၊ သူက ရှမျးတရုတျမကိုး၊ သူလဲ အမွဲတမျး သူ့ကောငျလးနဲ့ လိုးကွတယျ၊
ဒျေါယမငျးကအရမျးပှငျ့လငျးတယျ၊ ကနြျောတို့တှတေဲ့ အခြိနျတောငျ အမွဲတမျး ဟိုတယျသှားခိုငျးတယျ၊ တရကျ ဆရာမနဲ့ ဖုနျးပွော ရငျး ဒျေါယမငျးအကွောငျးမေးမိတော့ ဆရာမက ကနြျောကို ပွနျမေးတယျ၊ “”ဘာလဲ မောငျက သူ့ကိုစိတျဝငျစားလို့လား”” ပီး တော့ သူ့သူငယျခငျြးက စိတျပါတယျဆိုရငျ လုပျပေါ့တဲ့ သူခှငျ့လှတျတယျ ပွောတယျ၊ ဒါနဲ့ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ ဆရာမထကျ ဒျေါ ယမငျးကို ပိုလိုးခငျြနမေိတယျ၊ တနတေ့ော့ ဆရာမမှေးနေ့၊ ရောကျလာတယျ၊ ကနြျောတို့ ယူနနျအကငျဆိုငျမှာ စားကွသောကျကွ တယျ၊ စားသောကျပီးလို့ အိမျပွနျတော့ သူတို့ကို အရငျလြုကျပို့တယျ၊ ပီးမှ ကနြျောပွနျမယျဆိုပီးတော့ပေါ့၊ သူတို့အိမျရောကျတော့မှ မိုးက တအားသညျးလာတယျ၊
အဲဒါနဲ့ ဆရာမရော ဒျေါယမငျးရောက သူတို့ဆီမှာပဲ အိပျသှားပါတဲ့၊ ကနြျောလဲ နောကျကတြာရယျ မိုးရှာတာရယျရောပီး သူတို့ အခနျးမှာပဲ အိပျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ၊ သူတို့အခနျးယောကျတော့ အခနျးကာထားတာမရှိ့ပဲ ဘေးခငျြးကပျမှယေ့ာ ၂ခုပဲတှတေ့ယျ၊ အဲဒါနဲ့ ကနြျောရအေရငျခြိုးတယျ ပီးမှ ဆရာမခြိုးတယျ၊ အဲအခြိနျမှာ ဒျေါယမငျးက ကနြျောနဲ့ ဘီယာသောကျနတေယျ၊ ဆရာမရေ ခြိုးပီး ထကျလာတော့မှ ဒျေါယမငျး ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျသှားတယျ၊ ညဝတျအကျြီလဲပီး ခေါငျးရေ သုတျနတေဲ့ ဆရာမကို မွငျတော့ ကနြျောနောကျကနေ သိုငျးဖတျလိုကျပီး နို့တှကေို နယျလိုကျတယျ၊ မဲဒီအခြိနျမှာ ဆရာမက “”မောငျရယျ ယမငျးရှိတယျလေ၊.. အာ မမကလဲ မောငျအရမျးတငျးနပေီ၊ ကွညျ့ပါအဲုး”” ဆိုပီး သူ့လကျကို ဆှဲပီး ကနြေျာ့လီးကို ကိုငျခိုငျးလိုကျတယျ၊ အဲတော့မှ “”လူးဆို လေး ”” ဆိုပီး ကနြေျာ့လီးကို ဆှဲညဈလိုကျတယျ၊ “”အား နာမညျ မမ ”” ဆိုတော့မှ လကျကလှတျပေးတယျ၊ ကနြျောလဲ သူကို ကြ နျောဘကျဆှဲလှညျ့ပီး အငမျးမရ နမျးလိုကျတယျ၊ သူလဲ စိတျပါလာပီး ပွနျနမျးတယျ၊ အဲအခြိနိမှာ ကနြျောတို့နှဈယောကျဟာ ဒျေါ ယမငျးရှိတယျဆိုကို မသှေ့ားကွတယျ၊
“”အဟမျး အဟမျး ”” ဆိုတဲ့ အသံကွားမှ လူခငျြး ခှါပွီး ပွနျထိုငျနလေိုကျကွတယျ၊ ပွီးတော့ သုံးယောကျသား ဘီယာဆကျ သောကျကွတယျ၊ ဘီယာသောကျနရေငျးနဲ့ ဆရာမကို ကပျခြှဲလိုကျတယျ၊ “”မမ.. ဘာလဲ မောငျ .. ”” “” ကနြျော ဒီညမမနဲ့အတူတူ အိပျမှာနျော၊”” “”အငျပါမောငျရဲ့ ဒါပမေယျ့ မကဲရဘူးနျော ဒီမှာ ယမငျးရှိတယျ၊ ”” “”မမကလဲ သူလဲ နားလညျမှာပါ၊ ”” “”အေးပါ အေးပါ၊ ”” ဒီလိုနဲ့ အိပျယာဝငျတော့ ကနြျောနဲ့ ဆရာမက တမှယေ့ာ ဒျေါယမငျးက တမှယေ့ာပေါ့ ကနြျောလဲ အိပျယာပျေါရောကျ ကတညျးက လုပျငနျးစတော့တာပဲ၊ တခါတလေ ကဈစငျဆှဲသံတှကေ ပွှတျပွှတျနဲ့ ထှကျသှားသေးတယျ၊ ဒျေါယမငျးကတော့ ဟို ဘကျလှညျ့ပီးအိပျနလေရေဲ့၊ ကနြျောလဲ ဆရာမရဲ့ ညဝတျအကြီကိုခြှတျပီး နို့တှကေို စို့ပေးလိုကျတယျ၊ လကျတဖကျက စောကျဖုတျ ကို ပှတျပေးနတေယျ၊ ဆရာမလ်လဲသူ့သူငယျခငျြးဘေးမှာ ရှိတယျဆိုတဲ့ အသိကွောငျလားမသိဘူး စောကျရတှေကေို ရှဲနတောပဲ၊ ကြ နျောလဲ အတူတူပဲ ကနြျောအရမျးလိုးခငျြနတေဲ့ ဒျေါယမငျးက ဘေးမှာဆိုတော့ လီးက အစှမျးကုနျကို မာနတောပဲ၊ တျောတျောလေး ကွာကွာ နှူးပီးတော့မှ
“”မမ ဟိုဘကျလှညျ့ပေး ကနြျော နောကျကနလေိုးမယျ”” နောကျကနေ ခွတေပေါငျကြျော ကပျတိုးလေး လိုးလိုကျတယျ၊ ဆရာမ ကတော့ “”ရှီး အား ရှီး အား၊ ”” “”အငျး အား ကောငျးတယျ မမ ၊ မမ မောငျမရတော့ဘူး စောငျ့ခငျြလာပီ မှောကျပေးနျော မောငျ အပျေါကနေ စောငျ့ပေးမယျ”” “”အငျးမောငျ ”” သူ မှောကျပေးတယျ၊ ကနြျောလဲ လီးကို ဖငျကွားထဲကနေ စောကျဖုတျထဲကို နှဈ သှငျးလိုကျတယျ ပီးတော့မှ အားထဲ့ပီး စောငျ့လိုကျတယျ၊ စောငျ့လိုးရငျနဲ့ ဒျေါယမငျး ဖငျကွီးတှကေိုကွညျ့ကာ မှနျးလိုးနတေယျ၊ ပီး တော့မှ အကွံရပီး အတကျနိုငျဆုံး သူ့နားရောကျအောငျ နရောရှလေို့းရငျ လကျက သူ့ဖငျကွီးတှကေို ပှတျပေးနမေိတယျ၊ သူကလဲ ညိမျနတေယျ၊ အဲဒီတော့မှ သူလဲ အလိုးခံခငျြနတော သိလိုကျရတယျ၊ နောကျတော့ သူ့ညဝတျအကြီကို လှနျ ပီး ပျေါတငျပဲ ဖငျကွီး တှကေို ဖဈြညဈပေးလိုကျတယျ၊
သူလဲ မနနေိုငျတော့မှ ကနြျောဘကျကို လှညျ့လာပီး၊ အကြီခြှတျပေးတယျ၊ ကနြျောလဲ ဆရာမကို တိုတိုးလေး ကပျပွောပီး ဒျေါ ယမငျးကို ပျေါတငျပဲ လိုးဖို့ပွောလိုကျတယျ၊ သူကလဲ လကျခံသလို ဆရာမကလဲ လကျခံတယျ၊ အဲဒီမှာ စောကျဖုတျနှဈခုနဲ့ ကနြျော အလုပျရှုပျတော့တာပဲ၊ ကနြျောလဲ ဆရာမကို လိုးနတောရပျလိုကျပီး၊ “”မမ ကနြျော လီးကို စုပျပေးနျော ”” ကနြျောဘပကျလကျ လှနျပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့မှ ဒျေါယမငျးကို ကနြေျာ့မကျြနှာပျေါတကျခိုငျးပီး စောကျဖုတျကို လြှာနဲ့ယကျပေးလိုကျတယျ၊ ဆရာမ ကနြျောနဲ့ ဒျေါယမငျးတို့ သုံးယောကျ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျကွီးကို လိုးပှဲဆငျနှဲနကွေတယျ၊ ကနြျောက ပကျလကျအနအေထားနဲ့ ပဲနပေီး သူတို့နှဈယောကျကိုလူခငျြးခြိနျးကာ ဒျေါယမငျးက ကနြေျာ့လီးကိုစုပျကာ ကနြျောက ဆရာမစောကျဖုတျကို ယကျပေးနတေယျ၊ ဆရာမစောကျဖုတျက လိုးထားတဲ့အရှိနျနဲ့ စောကျရတှေရှေဲနပေီး ယကျလို့ တျောတျောလေးကောငျးတယျ ၊ အောကျက ဒျေါယမငျး ကလဲ လီးဒဈကို လြှာနဲ့ဝိုကျယကျလိုကျ၊ လီးတခြောငျလုံးကို ငုံစုပျလိုကျ လီးတလြှောကျ လြှာနဲ့ အပွားလိုကျယကျလိုကျနဲ့ ပညာ အကုနျပွနတေယျ၊ ခဏနတေော့
“”လိုးကွရအောငျ”” ဒျေါယမငျးက ကနြေျာ့ လီးပျေါတကျထိုငျ လီးကိုကိုငျပီး စောကျဖုတျဝမှာတော့ကာ တဖွညျးဖွညျးခငျြး ထိုငျခြ လိုကျတာ၊ အိုး ကောငျးမှကောငျးပဲ နှူးညံ့လိုကျတဲ့စောကျဖုတျဗြာ… ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျမသိဘူး၊ သူလဲ လီးတခြောငျးဘုံး သူ့ စောကျဖုတျထဲဝငျမှ ခပျသှကျသှကျလေး စောငျ့လိုးပေးနတေယျ၊ ကနြျောကလဲ မကျြနှာပျေါက ဆရာမ စောကျဖုတျကွီးကို အယကျ မပကျြဘူးပေါ့၊ ဆရာမကလ်လဲသူ့နို့ကွီးတှကေို ညှဈကိုငျကာ မကျြစိကိုမှိတျပီ ဖီး ခံနတေယျ၊ ကနြျောလဲ ဒျေါယမငျးစောငျ့တာ အားမရ လို့ အောကျကနလေီးကို ကော့ကော့ထိုးကာ ပွနျစောငျ့ပေးလိုကျတယျ၊ အဲဒီအခြိနျမှာလီးက သားအိမျနဲ့ သာံးထောကျပီ တ ထုတျထုတျနဲ့ပေါံ၊ ဒျေါယမငျးလဲ မောလာပီ အောကျကိုဆငျးပီး အနားယူနတေယျ၊ အဲ့အခြိနျမှာ ဆရာမကို လေးဘကျကုနျးခိုငျးပီး နောကျကနေ အားရပါးရစောငျ့လို့ပေးလိုကျတယျ၊
“ဖှပျဖှပျ စှပျစှပျ ” “” အားအား ကောငျးဆယျ မောငျ အားအား မွနျးမွနျဘေးလိုးပါနျော အား ကောငျးနပေီး အားမောငျ မရတော့ ဘူး အား”” ဆိုပီ အျောကာ မှောကျကွသှားတော့တယျ၊ ကနြျောလဲ သူ့ပျေါမှာ ခဏမှိနျးပီးဒျေါယမငျးကို သူ့ဘေးမှာ လေးဘကျကုနျး ခိုငျးကာ နောကျကနေ ထပျစောငျ့ပေးလိုကျတယျ၊ ထူးခွားတာက ဒျေါယမငျး စောကျဖုတျကွီးက ဘယျလိုပဲစောငျ့စောငျ့ လီးကို ပွညျ့ကပျြနတောပဲ အဲဒါ အားလုံးပွောနကွေတဲ့ မြော့ပါတယျ ဆိုတာမြားလားမသိဘူး၊ သူလဲ စောစောက လိုးထားတဲ့အရှိနျနဲ့ သိပျ ကွာကွာမစောငျ့လိုကျရဘူး ပီးသှားတယျ ၊ ဒီတခါတော့ ကနြေျာ့ လီးရတှေကေို သူ့စောကျဖုတျထဲ အကုနျဖနျြးထညို့ကျတယျ၊ အား… ကောငျးလိုကျတာမမတို့ရယျ… အဲဒီနကေ့စပွီး သူတို့နဲ့ ကနြျော အမွဲတမျးလိုလို လိုးခဲ့ကွတာ ကနြျော နောကျအလုပျပွောငျး လို့ ထိုငျးကို သှားတဲ့အထိပါပဲ၊ ….။ ပွီးပါပွီ….။
ကျနော်လဲ ရန်ကုန်ရောက်တာ ကြာလာတော့ ပျင်းလာတယ် အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလဲမရှိဘူး၊ အဲတော့ ဖုန်းထဲမှာ ဝီချက် အေပီပီ ကို ဒေါင်လုပ်ဆွဲပီး အကောင့်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာ ရှာလိုက်တော့ အများကြီးတွေ့တယ်၊ အဲဒီအထဲကမှ အသက်ကြီးကြီးနဲ့ အန်တီမမတယောက်နဲ့ လိုးဖူးတာ၊ သူက ကျောင်းဆရာမ အသက်ကတော့ ၅၀ လောက်ရှပီ၊ သူ့ကို ဟိုင်းလိုက်တော့ ပြန်ဟိုင်းတယ်၊ ‘နေကောင်းလား’ ‘ကောင်းတယ်’ ‘အသက်ဘယ်လောက်လဲ’ ‘ဒို့က မင်းထက်အသက်အများကြီးကြီးတယ်’ ‘ဒါဆို မမလို့ခေါ်မယ်’ ‘မမ မဟုတ်ဖူး အန်တီအရွယ်ပါ’ ‘ဟုတ်ရပါတယ် အန်တီ ‘ လိုပြောရင်း သူကမေးတယ်။ ‘ကျောင်းသားလား’ ကျနော်က ‘မဟုတ်ပါဘူး ကျောင်းက ဒုတိယနှစ်နဲ့ ထွက်ထားတာ’ ‘ရုပ်ကတော့ တော်တော်ပွေးမယ့် ရုပ်ပဲ’ ကျနော်ကလဲ ‘နဲနဲပါးပါးပါ’ လို့ ဖြေလိုက်တယ်၊
ခဏကြာတော့ သူ့ပုံတောင်းကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝကို ထင်မှတ်မထားတဲ့ပုံမျိုးဗျာ၊ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး၊ ‘အန်တီက လှလိုက်တာ’ ‘ဒို့က အိုနေပါပီ မင်းပွေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတွေလောက်တော့ မလှပါဘူး’ ‘အာ မဟုတ်တာ ကျနော် တွေ့ဖူးတဲ့ မိနိးမတွေထဲမှာ အန်တီက အလှဆုံးပဲ၊ ပီးတော့ အန်တီဘော်ဒီက တောင့်တယ်၊ ရှယ်ပဲ’ ‘ကောင်လေးနော် ဟုတ်လဲ မဟုတ်ပဲနဲ့’ ‘အဲဒါနဲ့ ထပ်ပြပါအုံး ကြည့်လို့မဝလို့’ ‘မင်းလဲ ပြလေ’ ‘ကျနော်ပြရင် တကယ်ကြည့်မှာလား’ ‘အင်းကြည့်မယ်’ ကျ နော်လဲ အရဲစွန့်ပီး ကျနော့် လီးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပီးပို့လိုက်တယ်၊ ‘ဟယ်အကြီးကြီးပဲ’ ‘ကြိုက်လား’ ‘ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ’ ‘ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးသွားလား’ ‘မဆိုးပါဘူး ၊ နားလည်ပါတယ်’ ‘အဲဒါဆိုရင် အန်တီပုံလဲပြ’ ‘မပြဘူး.. ကြည့်ချင်ရင် လာကြည့်’ ‘အိုကေ ဘယ်လာရမလဲ’ ဆိုတော့ သူလိပ်စာပေးတယ်၊ အဲ့ညကတော့ ဖုန်းထဲမှာ တချီလောက်ပီးအောင် လိုးလိုက်သေးတယ်၊ နောက်ရက် သူပေးတဲ့ လိပ်စာသွားတော့ တံခါးဖွင့်ပေးတယ်၊
“”တယောက်ထဲနေတာလား”” “”မဟုတ်ဘူး သူ့အခန်းဖော်က နယ်ပြန်သွားလို့”” ””အဲ ဒါနဲ ဘာသောက်မလဲ””” ကျနော်လည်း ””နို့သောက်မယ်””’ လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ “”လူဆိုးလေး…အဲဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့”” အခန်းထဲရောက်တော့ ကြမ်းပြင်မှာခင်းထားတဲ့ မွှေ့ယာထူထူကြီးပေါ ထိုင်ချလိုက်ပီး အန်တီကို ဖတ်ထားလိုက်တယ်၊ သူက “”ကဲပြောစမ်းပါအုံး လိုင်ပေါ်ကနေ ဘယ်နှစ်ယောက် တောင် စားပီးပီလဲ”” “”မစားဖူးသေးပါဘူး အန်တီရယ် ခုမှစားမှာပါ””ဆိုပီး သူ့ဖက်လှည့်ကာ ကစ်စင်ဆွဲလိုက်တယ်၊ ပီးတော့ သူ့ ပါးစပ်ထဲကို လျှာထဲ့ မွှေပေးလိုက်တဲ့ သူလဲ အဲလိုပြန်လုပ်ပေးတယ်၊ ကစ်စင်ရိုက်နေရင် သူ့အကျီကိုချွတ်ပီး နို့တွေကို နယ်၊ ပီးတော့ နို့တွေက်ု စို့ရင်းနဲ့ လုံချည်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်၊
ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားမှ အားပါးပါး နို့ကြီးတွေအယ် ဗိုက်ကချပ်၊ ဖင်ကြီးကကားပီး စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ဖောင်းနေတာပဲ ၊စောက်မွှေးတွေလဲ ရိတ်ထားတော့ ကျနေ်ာလဲ မနေနိုင်တာနဲ့ ကုန်းယက်ကစ်လိုက် တယ်၊ ဆရာမဆိုရင် ကောင်းလွန်းလို့ ထွန့်ထွန့်ကို လူးနေတာပဲ၊ နောက်တော့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ထဲ့ပီး ဂျီစပေါ့ နေရာ ကို မွှေ စောက်စိကို စုပ်ပေးလိုက်တော့ အမလေးတပီး သေးတွေပါ ပန်းထွက်လာတယ်၊ သူပီးသွားအောင် စုပ်ပေးပြီး ခဏနားလိုက် တယ် ၊ အဲဒီတော့မှ သူက မေားပန်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ကျနော့် ရင်ဘက်ပေါ် လာအိပ်ပီး “”တယောက်မှ မစားဖူးသေးလို့သာပေါ့ စားများ စားဖူးရင် သူသေသွားလောက်တယ်”” အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်းဘောင်းဘီ ကို ချွတ်ပီး လီးကိုသူ့လက်ထဲ ထည့်ပေးထား တယ် ၊ သူလဲ လီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေရင်ကနေ အောက်လျှောသွားပီး ကုန်းစုပ်တော့တာပဲ၊ အဲဒါတွေကြောင့် အန်တီမမ တွေကိုကြိုက်တာ သိပ်ပြောစရာမလိုဘူး၊
သူလဲလီးထိပ်ကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးလိုက် လီးတချောင်းလုံးကို လျှာနဲ့ယက်လိုက်၊ လီးတချောင်းလုံး ငုံစုပ်လိုက်နဲ့ တော်တော်လေး ကြာသွားတယ်၊ ကျနော်လဲ လိုးချင်လာတာနဲ့ “”အန်တီလိုးကြရအောင်”” “”အင်း”” သူ့ကိုပေါ်ကိုတက်ပီး လီးကို မထည့်သေးပဲ စောက်ဖုတ်ဝမှ လှည့်မွှေ့ပေးနေ် ကြာလာတော့ သူ့အလိုးခံချင်ပီတဲ့ အဲဒါနဲ့ လီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ချလိုက်တယ်၊ “”အား…. နာလိုက်တာ”” “”ခလေးပါအန်တီရယ် နောက်ကျရင် ကောင်းသွားမှာပါ”” ဆိုပီး ကျနော်လဲ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို စောင့်လိုးနေပိတယ်၊ နဲနဲကြာလာတောင့် စောင့်ရတာညောင်းလာတာနဲ့ သူ့ကိုမြင်းစီးခိုင်းပီး အောက်ကနေ နို့ကိုချေပေးနေတယ်၊
သူ လဲ မောလာတော့မှ… “”အန်တီပုံစံပြောင်းရအောင်”” ဆိုပီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ဖင်ဲကီးပြီး ဝိုင်းနေတော့ ကိုင်စောင့်ရ တာ အားရတယ်၊ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးပိုဆက်ရှင်ဆိုတော့ အားသကုန်လလိုးတော့တာကဲ သူလဲ ကောင်းလွန်းလို့ တအားအားနဲ့ အော်နေတာ၊ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့မှ သူလဲပီးချင်လာပြီး “”လုပ်ပါ မောင်ရယ် အရမ်းကောင်းနေပီ”” ကျနော်လဲ အရှိန်မြင့် စောင့်ရင်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတဆုံး ထည့်ကာ သုတ်ရေတွေကို ပန်းထဲလိုက်တယ်၊ ပီးတော့မှ “”အရမ်းချစ်တာပဲ မောင် ရယ်”” ဆိုပီး ပါးလေးကိုလာနမ်းတယ်၊ အဲ့နေက သူ့သူယ်ချင်းနယ်ပြန်သွားတာ ၂ညအိပ် ကြာမယ်ဆိုတော့ ကျနော်လဲ သူ့အခန်းမှာ ပဲအိပ်ပြီး အဲညက ၆ချီလောက်လိုးပြစ်လိုက်တယ်၊ နောက်ဆုံးအချီမှာတော့ ပါးစပ်ထဲကို လီးရေတွေ ပန်းထဲ့ပီး သောက်ခိုင်လိုက် တယ်၊ အဲဒီကနောက် သူ့သူငယ်ချင်း နယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်တိုင်း လိုးဖြစ်ကြတယ်၊
နောက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းက ရိပ်မိသွားပီး သူ့သူငယ်ချင်းကိုပါလိုးပေးလိုက်ရတယ်၊ ကျနော်နဲ့ ဆရာမအဆင်ပြေသွာတာ သူ့ သူငယ်ချင်းကြောင့် ဆိုတာ နောက်မှ သိရတယ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းကပဲ ကျနော့် အကောင့်ကို အပ်ပီး သူနဲ့ စကားပြောခိုင်းခဲ့တာ တဲ့၊ နောက်ပိုင်းတော့ သူ့နဲ့မိတ်ဆင်ပေးတယ်၊ သူနာမည်က ဒေါ်ယမင်း အသက်ကတော့ ၄၅ လောက်ရှိပီ၊ သူကတော့ ပွဲစားပေါ့၊ သူ့မှာ က ယောကျားရှိတယ် သူ့ယောကျားက အစိုးရဝန်ထမ်း၊ နယ်မှာတာဝန်ကျနေတာ၊ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ယမင်းက သူ့ယောကျားတပည့် လေးနဲ့ဖြစ်နေတာ၊ ဒါကိုလဲ ဆရာမပြောပြလို့သိရတာ၊ တကယ်အပြင်မှာ တွေ့လိုက်မှ ဒေါ်ယမင်းက ကျနော့် ဆရာမထက် ရုပ်ပို ချောနေတယ်၊ အသားဖြူတယ်၊ သူက ရှမ်းတရုတ်မကိုး၊ သူလဲ အမြဲတမ်း သူ့ကောင်လးနဲ့ လိုးကြတယ်၊
ဒေါ်ယမင်းကအရမ်းပွင့်လင်းတယ်၊ ကျနော်တို့တွေ့တဲ့ အချိန်တောင် အမြဲတမ်း ဟိုတယ်သွားခိုင်းတယ်၊ တရက် ဆရာမနဲ့ ဖုန်းပြော ရင်း ဒေါ်ယမင်းအကြောင်းမေးမိတော့ ဆရာမက ကျနော်ကို ပြန်မေးတယ်၊ “”ဘာလဲ မောင်က သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လား”” ပီး တော့ သူ့သူငယ်ချင်းက စိတ်ပါတယ်ဆိုရင် လုပ်ပေါ့တဲ့ သူခွင့်လွှတ်တယ် ပြောတယ်၊ ဒါနဲ့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဆရာမထက် ဒေါ် ယမင်းကို ပိုလိုးချင်နေမိတယ်၊ တနေ့တော့ ဆရာမမွေးနေ့၊ ရောက်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ ယူနန်အကင်ဆိုင်မှာ စားကြသောက်ကြ တယ်၊ စားသောက်ပီးလို့ အိမ်ပြန်တော့ သူတို့ကို အရင်လျုက်ပို့တယ်၊ ပီးမှ ကျနော်ပြန်မယ်ဆိုပီးတော့ပေါ့၊ သူတို့အိမ်ရောက်တော့မှ မိုးက တအားသည်းလာတယ်၊
အဲဒါနဲ့ ဆရာမရော ဒေါ်ယမင်းရောက သူတို့ဆီမှာပဲ အိပ်သွားပါတဲ့၊ ကျနော်လဲ နောက်ကျတာရယ် မိုးရွာတာရယ်ရောပီး သူတို့ အခန်းမှာပဲ အိပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ သူတို့အခန်းယောက်တော့ အခန်းကာထားတာမရှိ့ပဲ ဘေးချင်းကပ်မွှေ့ယာ ၂ခုပဲတွေ့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်ရေအရင်ချိုးတယ် ပီးမှ ဆရာမချိုးတယ်၊ အဲအချိန်မှာ ဒေါ်ယမင်းက ကျနော်နဲ့ ဘီယာသောက်နေတယ်၊ ဆရာမရေ ချိုးပီး ထက်လာတော့မှ ဒေါ်ယမင်း ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်၊ ညဝတ်အကျီ်လဲပီး ခေါင်းရေ သုတ်နေတဲ့ ဆရာမကို မြင်တော့ ကျနော်နောက်ကနေ သိုင်းဖတ်လိုက်ပီး နို့တွေကို နယ်လိုက်တယ်၊ မဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမက “”မောင်ရယ် ယမင်းရှိတယ်လေ၊.. အာ မမကလဲ မောင်အရမ်းတင်းနေပီ၊ ကြည့်ပါအဲုး”” ဆိုပီး သူ့လက်ကို ဆွဲပီး ကျနော့်လီးကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ အဲတော့မှ “”လူးဆို လေး ”” ဆိုပီး ကျနော့်လီးကို ဆွဲညစ်လိုက်တယ်၊ “”အား နာမည် မမ ”” ဆိုတော့မှ လက်ကလွှတ်ပေးတယ်၊ ကျနော်လဲ သူကို ကျ နော်ဘက်ဆွဲလှည့်ပီး အငမ်းမရ နမ်းလိုက်တယ်၊ သူလဲ စိတ်ပါလာပီး ပြန်နမ်းတယ်၊ အဲအချိနိမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဒေါ် ယမင်းရှိတယ်ဆိုကို မေ့သွားကြတယ်၊
“”အဟမ်း အဟမ်း ”” ဆိုတဲ့ အသံကြားမှ လူချင်း ခွါပြီး ပြန်ထိုင်နေလိုက်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ သုံးယောက်သား ဘီယာဆက် သောက်ကြတယ်၊ ဘီယာသောက်နေရင်းနဲ့ ဆရာမကို ကပ်ချွဲလိုက်တယ်၊ “”မမ.. ဘာလဲ မောင် .. ”” “” ကျနော် ဒီညမမနဲ့အတူတူ အိပ်မှာနော်၊”” “”အင်ပါမောင်ရဲ့ ဒါပေမယ့် မကဲရဘူးနော် ဒီမှာ ယမင်းရှိတယ်၊ ”” “”မမကလဲ သူလဲ နားလည်မှာပါ၊ ”” “”အေးပါ အေးပါ၊ ”” ဒီလိုနဲ့ အိပ်ယာဝင်တော့ ကျနော်နဲ့ ဆရာမက တမွေ့ယာ ဒေါ်ယမင်းက တမွေ့ယာပေါ့ ကျနော်လဲ အိပ်ယာပေါ်ရောက် ကတည်းက လုပ်ငန်းစတော့တာပဲ၊ တခါတလေ ကစ်စင်ဆွဲသံတွေက ပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ထွက်သွားသေးတယ်၊ ဒေါ်ယမင်းကတော့ ဟို ဘက်လှည့်ပီးအိပ်နေလေရဲ့၊ ကျနော်လဲ ဆရာမရဲ့ ညဝတ်အကျီကိုချွတ်ပီး နို့တွေကို စို့ပေးလိုက်တယ်၊ လက်တဖက်က စောက်ဖုတ် ကို ပွတ်ပေးနေတယ်၊ ဆရာမလ္လဲသူ့သူငယ်ချင်းဘေးမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင်လားမသိဘူး စောက်ရေတွေကို ရွှဲနေတာပဲ၊ ကျ နော်လဲ အတူတူပဲ ကျနော်အရမ်းလိုးချင်နေတဲ့ ဒေါ်ယမင်းက ဘေးမှာဆိုတော့ လီးက အစွမ်းကုန်ကို မာနေတာပဲ၊ တော်တော်လေး ကြာကြာ နှူးပီးတော့မှ
“”မမ ဟိုဘက်လှည့်ပေး ကျနော် နောက်ကနေလိုးမယ်”” နောက်ကနေ ခြေတပေါင်ကျော် ကပ်တိုးလေး လိုးလိုက်တယ်၊ ဆရာမ ကတော့ “”ရှီး အား ရှီး အား၊ ”” “”အင်း အား ကောင်းတယ် မမ ၊ မမ မောင်မရတော့ဘူး စောင့်ချင်လာပီ မှောက်ပေးနော် မောင် အပေါ်ကနေ စောင့်ပေးမယ်”” “”အင်းမောင် ”” သူ မှောက်ပေးတယ်၊ ကျနော်လဲ လီးကို ဖင်ကြားထဲကနေ စောက်ဖုတ်ထဲကို နှစ် သွင်းလိုက်တယ် ပီးတော့မှ အားထဲ့ပီး စောင့်လိုက်တယ်၊ စောင့်လိုးရင်နဲ့ ဒေါ်ယမင်း ဖင်ကြီးတွေကိုကြည့်ကာ မှန်းလိုးနေတယ်၊ ပီး တော့မှ အကြံရပီး အတက်နိုင်ဆုံး သူ့နားရောက်အောင် နေရာရွှေ့လိုးရင် လက်က သူ့ဖင်ကြီးတွေကို ပွတ်ပေးနေမိတယ်၊ သူကလဲ ညိမ်နေတယ်၊ အဲဒီတော့မှ သူလဲ အလိုးခံချင်နေတာ သိလိုက်ရတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ညဝတ်အကျီကို လှန် ပီး ပေါ်တင်ပဲ ဖင်ကြီး တွေကို ဖျစ်ညစ်ပေးလိုက်တယ်၊
သူလဲ မနေနိုင်တော့မှ ကျနော်ဘက်ကို လှည့်လာပီး၊ အကျီချွတ်ပေးတယ်၊ ကျနော်လဲ ဆရာမကို တိုတိုးလေး ကပ်ပြောပီး ဒေါ် ယမင်းကို ပေါ်တင်ပဲ လိုးဖို့ပြောလိုက်တယ်၊ သူကလဲ လက်ခံသလို ဆရာမကလဲ လက်ခံတယ်၊ အဲဒီမှာ စောက်ဖုတ်နှစ်ခုနဲ့ ကျနော် အလုပ်ရှုပ်တော့တာပဲ၊ ကျနော်လဲ ဆရာမကို လိုးနေတာရပ်လိုက်ပီး၊ “”မမ ကျနော် လီးကို စုပ်ပေးနော် ”” ကျနော်ဘပက်လက် လှန်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဒေါ်ယမင်းကို ကျနော့်မျက်နှာပေါ်တက်ခိုင်းပီး စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တယ်၊ ဆရာမ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်ယမင်းတို့ သုံးယောက် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကို လိုးပွဲဆင်နွှဲနေကြတယ်၊ ကျနော်က ပက်လက်အနေအထားနဲ့ ပဲနေပီး သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလူချင်းချိန်းကာ ဒေါ်ယမင်းက ကျနော့်လီးကိုစုပ်ကာ ကျနော်က ဆရာမစောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေးနေတယ်၊ ဆရာမစောက်ဖုတ်က လိုးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ စောက်ရေတွေရွှဲနေပီး ယက်လို့ တော်တော်လေးကောင်းတယ် ၊ အောက်က ဒေါ်ယမင်း ကလဲ လီးဒစ်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ယက်လိုက်၊ လီးတချောင်လုံးကို ငုံစုပ်လိုက် လီးတလျှောက် လျှာနဲ့ အပြားလိုက်ယက်လိုက်နဲ့ ပညာ အကုန်ပြနေတယ်၊ ခဏနေတော့
“”လိုးကြရအောင်”” ဒေါ်ယမင်းက ကျနော့် လီးပေါ်တက်ထိုင် လီးကိုကိုင်ပီး စောက်ဖုတ်ဝမှာတော့ကာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချ လိုက်တာ၊ အိုး ကောင်းမှကောင်းပဲ နှူးညံ့လိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ဗျာ… ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး၊ သူလဲ လီးတချောင်းဘုံး သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲဝင်မှ ခပ်သွက်သွက်လေး စောင့်လိုးပေးနေတယ်၊ ကျနော်ကလဲ မျက်နှာပေါ်က ဆရာမ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အယက် မပျက်ဘူးပေါ့၊ ဆရာမကလ္လဲသူ့နို့ကြီးတွေကို ညှစ်ကိုင်ကာ မျက်စိကိုမှိတ်ပီ ဖီး ခံနေတယ်၊ ကျနော်လဲ ဒေါ်ယမင်းစောင့်တာ အားမရ လို့ အောက်ကနေလီးကို ကော့ကော့ထိုးကာ ပြန်စောင့်ပေးလိုက်တယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာလီးက သားအိမ်နဲ့ သာံးထောက်ပီ တ ထုတ်ထုတ်နဲ့ပေါံ၊ ဒေါ်ယမင်းလဲ မောလာပီ အောက်ကိုဆင်းပီး အနားယူနေတယ်၊ အဲ့အချိန်မှာ ဆရာမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပီး နောက်ကနေ အားရပါးရစောင့်လို့ပေးလိုက်တယ်၊
“ဖွပ်ဖွပ် စွပ်စွပ် ” “” အားအား ကောင်းဆယ် မောင် အားအား မြန်းမြန်ဘေးလိုးပါနော် အား ကောင်းနေပီး အားမောင် မရတော့ ဘူး အား”” ဆိုပီ အော်ကာ မှောက်ကြသွားတော့တယ်၊ ကျနော်လဲ သူ့ပေါ်မှာ ခဏမှိန်းပီးဒေါ်ယမင်းကို သူ့ဘေးမှာ လေးဘက်ကုန်း ခိုင်းကာ နောက်ကနေ ထပ်စောင့်ပေးလိုက်တယ်၊ ထူးခြားတာက ဒေါ်ယမင်း စောက်ဖုတ်ကြီးက ဘယ်လိုပဲစောင့်စောင့် လီးကို ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ အဲဒါ အားလုံးပြောနေကြတဲ့ မျော့ပါတယ် ဆိုတာများလားမသိဘူး၊ သူလဲ စောစောက လိုးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ သိပ် ကြာကြာမစောင့်လိုက်ရဘူး ပီးသွားတယ် ၊ ဒီတခါတော့ ကျနော့် လီးရေတွေကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ အကုန်ဖျန်းထညို့က်တယ်၊ အား… ကောင်းလိုက်တာမမတို့ရယ်… အဲဒီနေ့ကစပြီး သူတို့နဲ့ ကျနော် အမြဲတမ်းလိုလို လိုးခဲ့ကြတာ ကျနော် နောက်အလုပ်ပြောင်း လို့ ထိုင်းကို သွားတဲ့အထိပါပဲ၊ ….။ ပြီးပါပြီ….။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged Onlineလိုငျးပျေါက ဆရာမ
မောငျ မသိအောငျ၊ ကို နဲ့ ခံခဲ့သညျ